Hepatoprotectors - အသည်းအဘို့သက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးစာရင်း
လူနာများ၏အသည်းကိုကူညီဖို့, ဆရာဝန်တွေ gepatoprotektory သူ့ကိုဆေးရုံကဆင်း - ခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆော်ဖို့နည်းလမ်းများ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသက်သေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရှည်လျားသောစာရင်းနားလည်ရန်အတွက်ကူညီရာတွင်ထိရောက်မှုနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး gepatoprotektory, စာရင်းလိုအပ်ပါတယ် အကယ်. အားလုံး 200 ခန့်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးပေးထားပါတယ်။
Hepatoprotectors - သက်သေခံချက်
အသည်း-gepatoprotektory များစွာသောလူများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပင်လုံးဝအရက်သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလျှော့ချ, အံ့ဖွယ်စဉ်းစားပါ။ ဆရာဝန်များကဒီအထငျမှားချေပနှင့်ပင်ထောက်ခံမှုအကောင်းဆုံး gepatoprotektory အသည်းသာနည်းလမ်းများကိုခေါ် - တစ်ရှူးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီပေးသည်။ မူးယစ်ဆေးသင်တန်းများယူလိုအပ်ချက် - one-အချိန်ဧည့်ခံ hepatoprotective ရောဂါ, အစားအစာနှင့်အရက်အလွန်အကျွံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်အသည်းမကယ်မ။ ဒီအမျိုးအစားမူးယစ်ဆေးသငျ့သညျသာဆရာဝန်များကသတ်မှတ်, ဒါမှမဟုတ်ကုထုံးအပြုသဘောရလာဒ်များမဆောင်ခဲ့ပါဘူး။
gepatoprotektory လျှောက်ထားခြင်းသက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးစာရင်းအောက်မှာပြထားပါသည်, ဒါကြောင့်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဦးတည်သွားစေရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် - အစားအစာ, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း, အစာခြေခြင်းနှင့် excretory စနစ်များကျန်းမာရေးတစ်ခုကျေနပ်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်, လေးနက်အသည်းရောဂါများလည်းမရှိဘယ်မှာ။ Hepatoprotectors - လက္ခဏာများစာရင်း:
အရက်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ။ တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left လျှင်ဒီရောဂါ, အသည်းခြောက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အသည်း restore က gepatoprotektory ယူပေမယ့်လုံးဝအရက်ကိုတက်မပေးရန်သာလိုအပ်ပါသည်။
Hepatitis B ပိုးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနာတာရှည်အမျိုးအစား။ ဘယ်အချိန်မှာဗိုင်းရပ်စ်မဆိုဗားရှင်း - A, B သို့မဟုတ် C, အသည်းတစ်ပျက်စီးခြင်း, သို့သော်ဗိုင်းရပ်စ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူခနျ့အပျ gepatoprotektory ။
ဖက်တီးအသည်း steatosis ။ ဤရောဂါအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီးအထိုင်များကလူများအတွက်ပုံမှန်ပါပဲ။ အစားအသောက်များတွင်နှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အတူအသည်း၏ယိုယွင်းနှေးကွေးမှခန့်အပ်ထားသော Hepatoprotectors ။
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ (မူလတန်း biliary အသည်းခြောက်, အဆိပ်အတောက်) ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အသည်းဆေးဝါးအပေါ်အဆိပ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ခန့်အပ်ထားသော gepatoprotektry ။
Hepatoprotectors - Classification
type သတ်မှတ်ဆရာဝန်လူနာနှင့်အသည်းရောဂါတစ်ရှူးများ၏ဇာတ်စင်၏အခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီး, ဆုံးဖြတ်သည်။ : အဓိကတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းများ, Hepatic ၏အောက်ပါအမျိုးအစားများပေါ် မူတည်.
ဤကဏ္ဍတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကျယ်ပြန့်အသည်းရောဂါများကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ မရှိမဖြစ် phospholipids - ဆဲလ်အမြှေးပါးနှင့်၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်း embedded ထားတဲ့ Ester, လျှော့ချနေကြတယ်, ပုံမှန်ပရိုတိန်းနဲ့ lipid ဇီဝြဖစ်, အသည်း connective တစ်ရှူးဆဲလ်များကအစားထိုး၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများအသက် 12 နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်းမခံ၏ရှေ့တော်၌ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ Hepatoprotectors - မရှိမဖြစ် phospholipids, သက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူဆေးဝါးများ၏စာရင်းကို:
Essentiale H ကို (Fort Essentiale H ကို) - ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အဆိပ်သင့်အသည်းပျက်စီးမှုအတွက်အသုံးပြုပဲပုပ် phospholipids အတွက်ထိရောက်သော gepatoprotektor;
Phospholipo - ဖက်တီး hepatosis စူးရှသောမူးယစ်စေခြင်းအဘို့အညွှန်ပြတဲ့လက်ဆီသင်ကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲရေး,
Ijssel Fort - phospholipids, nicotinamide, ဗီတာမင်, တာဝန်ပေးအပ်ရောဂါဗေဒအသည်းနဲ့သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောပါရှိသည်။
အသည်းနှင့်သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောသည်းခြေအက်ဆစ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - ursodeoxycholic အက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖြစ်ပါသည်, သူတို့ gallstones ဘို့အကြံပြု, သူတို့သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောအတွက်ကယ်လစီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ထိုသည်းခြေအိတ်၏စူးရှသောရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် contraindicated နေကြတယ်:
Ursofalk , Ursosan - အနိမ့်လက်စထရော, အသည်းဆဲလ်များ၏အမြှေးပါးကိုခိုင်ခံ့စေလက်စထရော gallstones ၏ဖျက်သိမ်းမြှင့်တင်ရန်, အသည်းအဆိပ်လျှော့ချ;
Livodeksa - တစ် cytoprotective အရေးယူရှိခြင်းအရေးယူ immunomodulating, အဆိပ်အတောက်တ္ထုများရဲ့မစင်ကိုလှုံ့ဆျောလက်စထရောများနိုင်မှုတိုးပွါးခြင်းနှင့်လက်စထရောကျောက်များဖွဲ့စည်းခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်, အဆိပ်အတောက်သည်းခြေအက်ဆစ် neutralizes ။
တစ်မိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ် ademetionine ornithyl aspartate အတူ - ဆေးဝါး-gepatoprotektory ဒီမျိုးစိတ်နှစ်ခုအဓိကအုပ်စုများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများအဓိကတက်ကြွစွာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်:
Geptral , Geptor - ademetionine ဆံ့, ဒီအမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်ဦးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အဆိပ်အတောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဖက်တီး hepatosis, အသည်းရောင်အသားဝါဘီ, အရက်အဆိပ်သင့်မှုနှင့်အတူတာဝန်ပေးအပ်ကြသည်;
Hepa-Merz - ဒီအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဟာအမိုးနီးယားအဆင့်ကိုလျှော့ချကူညီပေးသည်နှင့်အသည်း၏စွမ်းဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားအခါဆီဥနှင့်အဆိပ်အတောက်အသည်းရောင်အသားဝါဘီတာဝန်ပေးသည် ornithyl aspartate ပါရှိသည်။
တိရိစ္ဆာန်အသည်းများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု-gepatoprotektory တိရစ္ဆာန်များအသည်းအစိတ်အပိုင်းများကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းပြဿနာများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အသင့်လျော်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ, အသည်းခြောက်, ဖက်တီးအသည်း, ဒါပေမယ့်မကုသမှုအဘို့ထိုသူတို့သုံးပါ။ Hepatic ဆရာဝန်များ၏ဤအမျိုးအစားများ၏အပြုသဘောဆောင်ရှုထောင့်များ၏အဆိပ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်သူတို့၏မြင့်နိုင်စွမ်းပြောကြပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏အားနည်းချက်များကိုဓာတ်မတည်, unproven လုံခြုံမှုနှင့် immunopathological syndrome ရောဂါ၏အန္တရာယ်ကို၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှုများပါဝင်သည်။
Syrepar - အသည်းသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးလှုံ့ဆော်အဆိပ်ဖယ်ရှား, သွေးနီဆဲလ်၏အသှေးကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အရငျ့အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအသည်းထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်;
Hepatosan - အူထဲမှာဖြစ်ခြင်း, detoxification ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသည်းပုံမှန် hepatoprotective အရေးယူထားပြီးကျင်းပ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် gepatoprotektory - အသည်း၏ကုသမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ကျယ်ပြန့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအဆိုပါသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်, သည်းခြေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုနှိုးဆွနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, အဆိပ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ နို့ဆူးပင်ကနေဖန်ဆင်းတော်သော silymarin, - စက်ရုံ Hepatic ကာကွယ်၏အသုံးအများဆုံးအစိတ်အပိုင်း။ ဤတွင်အသုံးအများဆုံးနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုနေသောခေါင်းစဉ်:
Karsil - အသည်းအင်ဇိုင်းတွေ၏ဆဲလ်အမြှေးပါးတည်ငြိမ်နှင့် output ကိုအဆိပ်၏ပေးပို့မှုကိုရပ်စဲခြင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယျခန်ဓာကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်;
Gepabene - သည်းခြေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပုံမှန်သည်းခြေပြွန်စွာဝေဒနာကိုဖယ်ရှား, detoxifies, အသည်း function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်;
Liv အဘိဓါန် 52 - အသည်းဆဲလ်များနှင့်ပုံမှန်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလည်ပတ်၏ပွနျလညျထူထောငျကိုအားပေးအားမြှောက်။
ဖြည့်စွက် - အခြေခံအားဖြင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖြစ်ပြုမူသောဤဆေးဖက်ဝင်အပင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အဖြစ်အလေးအနက် gepatoprotektory အသည်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ကလေး၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အ contraindicated နေကြတယ်ဖြည့်ခန့်အပ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုအသည်းအဘို့အမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းပါဝင်သည် ဆူးပင် များနှင့်အခြားစက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများကို။ ဖြည့်စွက်-gepatoprotektory, သက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးစာရင်း:
Galstena - နာတာရှည်ပန်ကရိယနှင့်အသည်း, သည်းခြေအိတ်ရဲ့ပုံမှန်အဘို့တာဝန်ပေး;
Hepel - ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာဝမ်းပုံမှန်, သည်းခြေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်, detoxifies;
Ovesol - Oats နှင့်အခြားအပင်ပေါ်တွင်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဖြည့်စွက်, Anti-inflammatory, detoxification, choleretic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်;
Hofitol - artichoke ၏ပြင်ဆင်မှု, အသည်းတစ်သျှူးများနှင့်အခွအေနေ၏အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပုံမှန်, သည်းခြေ၏စီးဆင်းမှုကိုလှုံ့ဆော်သောကြောင့်သည်းခြေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ရပ်တန်ကာကွယ်ပေးသည်, detoxifies ..
သက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူ Hepatoprotectors - စာရင်း
နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ဆရာဝန်များနေဆဲအသည်းသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးများအတွက်တကယ်ထိရောက်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်ရှိမရှိအပေါ်ငြင်းခုံ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်သက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးထိရောက်သော gepatoprotektory, စာရင်းရှာနေကြသည်သောသူတို့အဘို့:
interferon မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်မရှိမဖြစ် phospholipids ထိရောက်စွာအသည်းရောင်စီပြုမူဆက်ဆံ;
ထိပ်တန်း gepatoprotektory သူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုပေးရန်သမားများက check လုပ်ထားနှင့်သက်သေပြလျက်ရှိသည်:
Fort Essentiale H ကို - phospholipids တစ်ခု gepatoze မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်ထိရောက်မှု, အရက်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ, အနိမ့်ရှိသည် - အသည်းအသည်းခြောက်,
Ursofalk, Ursosan - အသည်းခြောက်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်;
Geptor, Geptral - အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်အတွင်းထိရောက်မှု၏အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အရက်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ ;
Galstena, Hepel - အသည်းရောင်အသားဝါဘီ, အသည်းခြောက်, gepatoze အတွက်ထိရောက်မှုတစ်ဦးအနိမ့်အဆင့်အထိ။
ဆရာဝန်များအခြို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ-gepatoprotektory လိုအပ်သောယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးတဦးတည်းအမှု၌အသုံးဝင်သော, အခြားသောအတွက်အသုံးမကျသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သတ်မှတ်သေချာပေါက်ပိုကောင်းဆရာဝန်သင့်ပါတယ် - hepatologist ။ နှင့်အသည်းရောဂါနှင့်အတူအားလုံးလူနာကိုအောက်မေ့ရပါမည် - အပြည့်အဝမတည်ရှိပါဘူးအသည်း restore တစ်ဦးမှော်နည်းလမ်း။
အဆိုပါသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော၏တစ်ခုနဲ့ပက်ပင်း - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
ရက်နာ - အဘယ်သို့ပြုသနည်း
အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါ - ရောဂါလက္ခဏာ
အဘယ်ကြောင့် metronidazole သတ်မှတ်နှင့်မည်သို့မူးယစ်ဆေးမှုပုံစံအားလုံးကိုသုံးစွဲဖို့?
သူငယ်တန်း - လိုအပ်ပါက?
ပန်ကရိယကင်ဆာ - ပထမလက္ခဏာများ
ဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင် 2018 - ဒီနှစ်အများဆုံးဖက်ရှင်ရွေးချယ်မှု၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
အမေရိကန်သမ္မတနှင့်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူလိုက်နာရမယ်လို့ 19 တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများ
ဘာစီလိုနာအတွက် CASA Mila
ပန်းရောင်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ယုတ္တိဗေဒအန်တုကြောင်းအစားအသောက်နှင့်စပ်လျဉ်း 20 အမေရိကန်ဥပဒေများ
ရှင်ဘုရင်၏ပညာရေး: အဘယ်အရာကိုများနှင့်ဂျော့ခ်ျနှင့် Charlotte မဖွစျနိုငျနိုငျသညျ